ရုပ်ရှင်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ – AnZarTone
ရုပ်ရှင်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
1.The Internet Movie Database (IMDb)
အင်တာနက်တစ်ခွင်မှာ အကြီးဆုံး ရုပ်ရှင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီး ဖြစ်တဲ့ IMDb ကို ၁၉၉၀ Colin Needham ဆိုသူက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာတော့ IMDb ကို Amazon ဆီကို ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေသိ Colin ကတော့ IMDb ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက်လက် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ၂၁ ရာစုအလွန်မှာတော့ IMDb ကို ဒီဇိုင်းများ ပြောင်းလဲခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးကတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုချင်းစီကို ကောင်း၏/ဆိုး၏ ဝေဖန်အကြံပြုတာတွေကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ TomatoMeter ဆိုပြီး ရုင်ရှင်ကို ဝေဖန်သူတွေရဲ့ ဝေဖန်ချက်အလိုက် ခရမ်းချဉ်သီးပုံစံ လေးတွေနဲ့ ပြသပေးထားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုရဲ့ score က နိမ့်နေမယ်ဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးက အစိမ်းရောင်ပုံစံ ဖြစ်နေတတ်ပြီး၊ score ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ခရမ်းချဉ်သီးက အနီရောင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာလည်း အထက်က Rotten Tomatoes နည်းတူ ရုပ်ရှင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ score တွေကို ပြသပေးပါတယ်။ Rotten Tomatoes နဲ့ မတူတာတွေကတော့ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ Games, TV, Music တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားခြင်းပါပဲ။
ရောင်စုံရုပ်ရှင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီး ဖြစ်တဲ့ ComingSoon မှာတော့ မကြာမီ ပြသတော့မယ့် ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ trailer တွေကို တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် DVD ဇာတ်ားတွေရဲ review နဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဇာတ်ားတွေရဲ့ သတင်းတွေကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
5. Movie Mistakes
ရုပ်ရှင်တစ်ခုရဲ့ အမှားတွေကို သိလိုပါသလား။ ဒါဆို Movie Mistakes က သင့်ကို ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ Movie Mistakes က သူ့ရဲ့ နာမည်နဲ့ လိုက်ဖက်လှအောင် ရုပ်ရှင်တစ်ခုရဲ့ အမှားတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုနှစ်သ်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုရဲ့ အမှားကို သိချင်ရင်တော့ ဒီ Movie Mistakes ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ သွားကြည့်ပါလို့ …။
6. Chasing The Frog
ရုပ်ရှင်ထဲက အကြောင်းအရာတွေနဲ အပြင် တကယ့်လက်တွေ့ဘဝကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝ်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုလုံးမှာတော့ Google Adsense နဲ့ Amazon ကြော်ငြာတွေကို ထည့်သွင်းထားပြီး ရုပ်ရှင်တစ်ခုချင်းစီ ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း သူနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ လင့်ကိုလည်း ညွှန်းဆိုထားပါတယ်။
7. The Academy Of Motion Picture Arts And Sciences (Oscars)
ဒီဇိုင်း လန်းတဲ့ ဒီအော်စကာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးမှာတော့ သူတို့ရဲ့ ကျင်းပမယ့် ပွဲတွေကို ဖော်ပြထားတဲ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ အော်စကာ ဆုပေးပွဲ အကြောင်းအရာများကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
8. Festival De Cannes
9. The Razzies
ရုပ်ရှင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ဒါ့ပုံတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားတဲ့ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုက်ထဲမှာတော့ ရုပ်ရှင်အလိုက် ဒါမှမဟုတ် ဇာတ်ကောင်အလိုက် ဒါ့ပုံတွေကို လွယ်လင့်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ထိတ်လန့် သွေးပ်ျဖွယ် ဇာတ်ကားတွေကိုမှ နှစ်သက်ကြသူများအတွက် ဒီ Horror Movies က ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ အနက်ရောင် လွှမ်းခြုံနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်းက သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပါရဲ့ ….။
12. Bad Biology
လူကြိုက်များ ကျော်ကြားတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ဇီဝဗေဒပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သိပ္ပံပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကို အမှားတွေကို ဖော်ပြပေးတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမှ ကြော်ငြာ မပါတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုပါပဲ။
UK ရဲ နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင် မဂ္ဂဇင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Empire ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်းကတော့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိလှပါတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတေ၊ review တွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေ၊ ပုံတွေ၊ အင်တာဗျူးတွေ စသည်ဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
14. Film School Rejects
Hollywood နဲ့ မကြာမီ ပြသမယ့် ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ သတင်းတွေ၊ အင်တာဗျူးတွေကိုတော့ ဒီ Film School Rejects ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဘလော့ဂ်ထဲမှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
16. Screen Rant
17. Kids In Mind
မိမိရဲ့ ကလေးတွေ ဘယ်ရုပ်ရှင်တော့ဖြင့် ကြည့်သင့်တယ်၊ မကြည့်သင့်ဘူး စတာတွေကို သိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Kids In Mind ကို သွားပြီး လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
18. Hulu Movies
19. The Quentin Tarantino Archives
20. Roger Ebert
This entry was posted in Blog and tagged movie websites. Bookmark the permalink.
← Facebook Chat ထဲမှာ Smiley များ ထည့်ချင်သူများအတွက်
လှပသော အရိပ်ပုံလေးများ →